वी.पी. प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिमा डा. श्रेष्ठ
२०७३ माघ ८ शनिबार, धरान । धरान स्थित वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिठानका शिक्षाध्यक्ष डा. विक्रम प्रसाद श्रेष्ठले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयवाट उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । गत पुस २० गतेदेखि प्रतिष्ठान उपकुलपति विहिन हुंदा सम्पूर्ण आर्थिक, शैक्षिक तथा अस्पताल सम्बन्धि प्रशासनिक कार्यहरु ठप्प भएका थिए । शिक्षक, कर्मचारीको नियमिति तलब तथा मासिक विद्युत महशुल समेत भुक्तानी हुन सकेको थिएन । ... बाँकी अंश»
कान्ति अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य भवन बन्ने
२०७३ माघ ७ शुक्रबार, काठमाडौँ । नेपालको एक मात्र बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य भवन बन्ने भएको छ । स्वाथ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले रु चार करोड लागतमा निर्माण गरिने सो भवन अस्पताललाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ बनाउने योजनाअन्तर्गत बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । नर्वेको फिर्विट फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग र सिविन नेपालको संयोजनमा उक्त भवन निर्माण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री थापाले केही दिनमा नै भवन निर्माणको सम्झौत ... बाँकी अंश»
स्वास्थ्य सेवा विभागमा ल्याईए पन्त, चौधरीको काज फिर्ता
२०७३ माघ ७ शुक्रबार, काठमाडौं। स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा डा. राजेन्द्र पन्त नियुक्त भएका छन् । २७ वर्षदेखि जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएका डा. पन्त महानिर्देशक हुनुअघी वाल स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकको रुपमा रहेका थिए । माघ ६ को मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार डा पन्तलाई महानिर्देशकमा बनाइएको हो। लामो समय पव्लिक हेल्थका क्षेत्रमा काम गरेका डा. पन्तको आगमन पछि विभागमा अझ व्यवस्थित काम हुने भन्दै कर्मचारीहरु समेत खुशि देखिएका छन् । उनीहरुले विभि ... बाँकी अंश»
यस्तो पो प्रतिवद्धताः ‘चर्पीमा दिसा गर्नेछौँ, साबुनपानीले हात धुनेछौं’
२०७३ माघ ६ बिहिबार, बनेपा । “पूर्वमा सुनकोसी सिमाना, पश्चिममा झिउ खोला, उत्तरमा खरेलथोक गाविस र दक्षिणमा सुनकोसी र झिउखोला दोभान भित्रको सिमानाभित्र हामी सबै चर्पीमा दिसा गर्नेछौँ र दिसा गरेपछि साबुन पानीले हात धुनेछौँ ।” आ–आफ्नो आसनबाट सबैजना उठ्छन र सोही वाक्यांश दोहो¥याउँछन्, झट्ट सुन्दा अपत्यारिलोजस्तो लाग्ने वाक्यांश काभ्रेपलाञ्चोकको कोसिदेखा गाविसमा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहनलाल जैसीले खुल्ला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रममा सहभ ... बाँकी अंश»
जानौँ ग्रीन टि पिउनुका बेफाइदा
२०७३ माघ ४ मंगलबार, एजेन्सी । तपाईले सुन्नु भएको होला ग्रीन टि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक हुन्छ । तर के यो कुरा सत्य हो ? ग्रीन टि पिउनुमा फाइदा मात्र नभएर बेफाइदा पनि रहेको छ । हेरौ ग्रीन टिसँग जोडिएका आवश्यक तथ्य । प्राय मानिसहरु ज्यादा ग्रीन टि पिउनाले वजन कम हुन्छ भन्ने गर्दछन् तर ज्यादा ग्रीन टि पिउनाले टाउको दुख्ने, डायरिया हुने जस्ता समस्या देखा पर्दछन् । वजन घटाउन प्रतिदिन ३ कप ग्रीन टि नै काफी हुन्छ । ग्रीन टि पिउनुको सहि समय द ... बाँकी अंश»
अञ्चल अस्पतालमा ६० प्रतिशत बिरामी बढे
२०७३ माघ ४ मंगलबार, दाङ । यहाँको अस्पतालमा ६० प्रतिशत बिरामी बढेका छन् । राप्ती अञ्चल अस्पताल तुलसीपुरमा टिचिङ हस्पिटल, महाराजगन्जका आवासीय विशेषज्ञ चिकित्सक आएसँगै अस्पतालमा पनि दिनप्रतिदिन सेवा लिने बिरामी सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गएको अस्पतालले जनाएको छ । हाल अञ्चल अस्पतालका बिरामीको भीड लाग्ने गरेको छ । आवासीय विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा लिने बिरामीसँगै अन्य बिरामी पनि दिनहुँ बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालमा पहिले दैनिक एकसय बिरामीले से ... बाँकी अंश»
अब ८ वटा खर्चिला रोगको उपचार निशुल्क : मन्त्री थापा
२०७३ माघ ३ सोमबार, दोलखा । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ८ वटा खर्चिला रोगको उपचार निशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । दोलखा पुगेका मन्त्री थापाले औषधि अभावमा अब कसैले पनि अकालमा मृत्यु वरण गर्नु नपर्ने बताएका हुन् । मन्त्री थापाले भने, ‘उपचार गर्दा कोही पनि कंगाल नहुने वातावरणका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रमबारे जानकारी दिँखै मन्त्री थापाले अब बीमामार्फत जनताको उपचार सरकारले उठाउन लागेको बताए । मन्त्री थापाले थपे, ‘कानुन ... बाँकी अंश»
कागतीलाई पैतालामा लगाएर लिनुस् यी फाइदै फाइदा
२०७३ माघ २ आइतबार, एजेन्सी । जाडो मौसममा पैताला फुट्ने समस्या धेरैमा देखिने गर्दछ । पैताला नफुटोस् भन्ने धेरै चाहाना पनि हुन्छ । तर तपाईलाई सायद थाहा छैन होला एक कागतीले फुटेको पैताला ठिक गर्न सक्छ भनेर । त्यसको लागि तपाईले अरु केहि होइन कागतीलाई आफ्नो मोजामा राखेर ठिक गर्न सक्नुहुनेछ । बिधि यसको लागि तपाईलाई मोजा , कागती र नरिबलको तेलको आवश्यकता पर्दछ । कागतीलाई आधा काटेर अफ्नो पैतालामा मिल्ने आकार बनाउनुहोस् । काटेको कागतीलाई फुटेको कुर्कुचा ... बाँकी अंश»
कस्तो वेदनाः एकैघरका चार मिर्गौला पीडित
२०७३ पौष २८ बिहिबार, फलेवास । एकै घरका चार सदस्य मिर्गौैला रोगबाट पीडित बनेको परिवारलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न प्रवासी नेपालीले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । पर्वतको कुर्घा गाविस–२ को त्रिलोचन शर्माको परिवारलाई प्रवासी युवाले आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । मिर्गौला पीडित परिवारका लागि सहयोग सङ्कलन अभियान चलाइरहेको एकता युवा क्लब, पर्वतको संयोजनमा नेदरल्यान्डमा बस्ने प्रवासी नेपालीले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । जनसम्पर्क समिति नेदरल्यान्डका पूर्वअध्यक् ... बाँकी अंश»
१६ महिनाकै जन्मान्तरमा तेस्रो बच्चा जन्माउन खोज्दा पाठेघर फुट्यो
२०७३ पौष २६ मंगलबार, खोटाङ । सुत्केरी ब्यथाका क्रममा पाठेघर फुटेकी खोटाङकी एक गर्भवती आमाको पेटबाट मृत बच्चा निकालिएको छ । चौबीस घन्टाभन्दा बढी समयसम्म सुत्केरी ब्यथा लागेकी दोर्पा चिउरीडाँडा–७ की इन्द्रकुमारी भुजेलको पेटबाट शल्यक्रिया गरेर मृत अवस्थाको बच्चा निकालिएको हो । पाठेघर फुटेर सिकिस्त बनेको अवस्थामा जिल्ला अस्पताल दिक्तेलमा ल्याइएकी भुजेलको एमडिजिपी डा नारायण बराल, मेडिकल अधिकृतद्वय शैलेन्द्र श्रेष्ठ र अशोक गिरीको टोलीले शल्यक्रिया गरेर मृ ... बाँकी अंश»
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्यायाे मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपचार निर्देशिका
२०७३ पौष २० बुधबार, काठमाडौँ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचार प्रदान गर्न ‘उपचार निर्देशिका’ ल्याएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुर्नजागरण महाशाखाले तयार पारेको निर्देशिकामा उदासिनता, चिन्ता, छारेरोग, गम्भीर मानसिक समस्या, लागु पदार्थजन्य मानसिक समस्याको पहिचान, उपचार र व्यवस्थापनको पद्धतिका बारेमा उल्लेख गरेको छ । महाशाखाका निर्देशक मोहम्मद दाउदका अनुसार जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीका स्वास्थ्यकर् ... बाँकी अंश»
जिन्दगीभर खुशी बन्न चाहनुहुन्छ ? झर्को नमानी पढिदिनुस् पाँच तरिका...
२०७३ पौष १८ सोमबार, काठमाडौं । मानिस सानो खुशीका लागि जिन्दगीलाई बन्दगी राख्न तयार हुन्छ । अलिकति खुशीका लागि पैसाको खोलो बगाउँछ । तर त्यही खुशीको खोजीमा जिन्दगी बितेको पत्तो पाउँदैन । तर खुशी नै बन्ने हो भने आफूलाई अनुशासित राखे काफी छ । एक त्यस्तो व्यक्ति जो विश्वकै सबैभन्दा खुशी हुने व्यक्ति नेपालमै बसेका व्यक्ति हुन् भन्दा सबैलाई पत्यार नलाग्ला । फ्रान्सका वैज्ञानिक म्याथ्यु रिकार्ड सन् १९९१ मा आफ्ना गुरु परलोक हुँदा दुःखी भएका थिए । त्यसपछि अहिलेसम्म कह ... बाँकी अंश»
कुष्ठरोग अरुलाई सर्छ भन्ने अन्धविश्वासः ४० वर्षदेखि खोला किनारमा बास
२०७३ पौष १८ सोमबार, रुकुम । कुष्ठरोग लागेपछि अरुलाई पनि सर्छ भन्ने अन्धविश्वासका कारण रुकुमको बाँफीकोटकी एक महिला ४० वर्षदेखि खोलाको किनारमा बस्दै आएकी छिन् । बाँफीकोट–८ की ६० वर्षीया तुलसा केसी कुष्ठरोगकै कारण ४० वर्षदेखि स्थानीय ढार्नेखोलाको छेउमा बस्न बाध्य भएकी हुन् । सानै उम्मेरमा कुष्ठरोग भएपछि उनलाई आफन्त र गाउँलेले खोलाको किनारमा बनाइदिएको सानो छाप्रोमा बस्दै आएकी छिन् । १३ वर्षको उम्मेरमै कुष्ठरोग लागेको र त्यस बेलादेखि आफू एक्लै बस्दै आएको के ... बाँकी अंश»
अब लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा दूरबिनबाटै पत्थरी निकालिने
२०७३ पौष १६ शनिबार, तिलोत्तमा(रुपन्देही) । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटबलमा दूरबिनबाट पत्थरी निकाल्ने पद्धति ल्यापरोसी सेवा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा विकास देकोटाले अस्पतालका शल्यचिकित्सकको टोलीले सेवा सुरु गरेको जानकारी दिए । बुटवल– १३ देवीनगरकी रीता नेपालीले उक्त सेवा लिएर उद्घाटन गरिएको अस्पतालले जनाएको छ । अञ्चल अस्पतालमा सुरु भएको सो सेवा शल्यक्रिया विशेषगरी स्त्रीरोगका लागि लाभदायक हुने ... बाँकी अंश»
२०७३ पौष १५ शुक्रबार, दाङ । दाङमा गर्भवती महिलाहरुलार्इ नियमित गर्भ परीक्षण गराउने चेतना जगाउने उद्देश्यले गर्भवती महिलालाई गर्भ परीक्षण गराउन फोनबाटै निम्ता गरिने गरेको छ । दाङको धनौरी गाविसका महिलालाई स्वास्थ्य चौकीबाटै यसरी ‘गर्भवती चेक जाँच गराउने समय आएपछि गर्भवती महिलालाई हजुरको गर्भ जाँच गर्ने दिन आयो भनेर फोनबाट बोलाउने गरेको स्वास्थ्य चौकीका निमित्त प्रमुख मोहन रावतले बताए। गर्भवती महिलालाई पाँचपटक स्वास्थ्य चौकीले फोन गर्ने गर्दछ । गर्भवती भएको च ... बाँकी अंश»
अवैध निजी स्वास्थ्य संस्थामाथि अंकुश, फागुनभित्र दर्ता तथा नवीकरण नभए खारेज हुने
२०७३ पौष १४ बिहिबार, काठमाडौँ । अवैध रुपमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भएको पाइएपछि सरकारले उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा निजी अधिकांश स्वास्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो । नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थि ... बाँकी अंश»
अवैध स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी दायरामा आउने मौका
२०७३ पौष १३ बुधबार, काठमाडौं । अवैध रुपमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु संचालन भएको पाइएपछि सरकारले त्यस्ता संस्ठालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ नीति लागु गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जिम्मेबारी सम्हालेपछि अनुगमन गर्दा निजी अधिकांश स्वस्थ्य संस्था अवैध देखिएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका संशोधन सहित जारी गर्दै उनीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याएको हो । नयाँ निर्देशिका लागु भएपछ ... बाँकी अंश»
अब प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क मिर्गौला परीक्षण, शुरु भयो पत्रकारहरुबाट
२०७३ पौष ११ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले निःशुल्क रुपमा पत्रकारहरुको मिर्गाैला परीक्षण गराएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको संयोजनमा सोमबार युनियनको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको निशुल्क मिर्गौला परीक्षणको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले शुरुवात गरे । युनियनले सधैंगरी कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गर्दै आफ्नो रजत बर्षको अवसरमा यस्तो कार्यक्रम गरेको थियो । युनियनले पहिलो पटक मिर्गाैला रोगको मात् ... बाँकी अंश»
स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क मृगौला परीक्षण गर्न आह्वान
२०७३ पौष ११ सोमबार, काठमाडौं । मृगौलामा कुनै खरावी छ की छैन भन्ने परिक्षण गराउने व्यवस्था स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै गरिएकाले त्यसको उपयोग गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ । मृगौला परिक्षणका लागि प्रयोग हुने ‘डिपिस्टीक किट’ सबै जिल्लामा पठाइ सकिएकाले स्थानीय तहमै मृगौला परिक्षण गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको हो । यो सेवाका बारेमा धेरैलाई जानकारी नभएकाले प्रचार प्रसार गर्नका लागि नेपाल प्रेस युनियनले पत्रकारहरुको निःशुल्क मृगौला परिक्षण कार ... बाँकी अंश»
पाटन प्रतिष्ठानको एमविविएस परीक्षा विवाद : दुवै नतिजासूची बदर गर्न निर्देशन
२०७३ पौष ९ शनिबार, काठमाडौ । पाटन विज्ञान प्रतिष्ठानको एमविविएस परीक्षामा देखिएको विवादलाई मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबीबीएस अध्ययनको लागि गत कार्तिकमा लिएको प्रवेश परीक्षाको पहिलो र दोस्रो दुवै नतिजासूचीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले बदर गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रतिष्ठानले गत मंसिर १५ र १७ गते प्रकाशित गरेको नतिजासूची विवादित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमूख डा. भोलाराम श्रेष्ठको स ... बाँकी अंश»